En Bref Archive | NewsMada | Page 127
Par Taratra sur 18/05/2016 En Bref, NS Malagasy
Mbola nanohy ny fitokonana ny mpampianatra ao amin’ny Lycée Moderne Ampefiloha omaly, araka ny toromarika nomen’ny sendikà ny herinandro lasa teo. Anisan’ny nanohana ny fitakiana izy ireo ka niato ny fampianarana ary nalefa nody ny mpianatra. Efa voaloha ny « vacation » tamin’ny fanadinana nefa mbola miandry ny toromarika izy ireo vao hamerina ny fampianarana.
Hiverina hivory hamaritra ny lahadinika ireo depiote eny Tsimbazaza, anio. Efa mandeha koa anefa ny feo fa miketrika ny hanongana ireo birao maharitra ny depiote sasany, noho ny fitongilanana amin’ny fandefasana depiote mankany ivelany. Tsiahivina fa tokony hodinihina amin’izao fivoriana izao ny satan’ny fifandraisana sy ny serasera. Nanao antso avo ny sendikàn’ny mpiasan’ny Jirama, omaly, […]
Par Taratra sur 17/05/2016 En Bref, NS Malagasy
Mpihady volamena miisa 11 indray nihotsahan’ny tany tany Ankaboka Mahazoarivo Vohipeno, ny zoma teo. Vokany, olona fito maty raha avotra kosa ny efatra izay samy mponina avy any an-toerana avokoa. Voalaza fa nihotsaka tampoka ny tany raha teo am-pihadiana izy ireo ka tototra tao. Efa natolotra ny fianakaviana ny razana. Mitohy ny fanadihadiana ataon’ny zandary […]
Par Les Nouvelles sur 14/05/2016 En Bref, NS Français
Vatomandry Expérience – Evénement d’envergure pour le district Durant le week-end de la Pentecôte, Vatomandry sera le théâtre de plusieurs événements d’envergure organisés sous l’égide de la commune urbaine de la localité et l’Economic development board of Madagascar (EDBM). Baptisé « Vatomandry Expérience », ce rendez-vous inédit se déclinera en deux volets dont le premier […]
Un médecin âgé de 53 a été retrouvé mort mardi dernier dans une rivière à Komajara, district d’Analalava. La veille, alors qu’il devait participer à la campagne relative à la « Semaine de la mère et de l’enfant », il avait quitté Analalava en pirogue en compagnie de cinq autres personnes. Lors de leur passage […]
Recensement des commerçants – La CUA précise Face à la réticence des commerçants sur le recensement actuellement en cours, la Commune urbaine d’Antananarivo (CUA), via les chefs des six arrondissements de la capitale, a tenu à préciser, à l’occasion d’une rencontre ave la presse qui s’est tenue, hier, à l’hôtel de ville à Analakely, qu’une […]
Par Taratra sur 14/05/2016 En Bref, NS Malagasy
Hanohana sy hiara-kiasa amin’ny Ceni ny Pnud. Nihaona teny Andraharo, afakomaly, ny solontenan’ny Pnud, Violet Kakyomya, sy ny filohan’ny Ceni, Rakotomanana Hery. Samy resy lahatra ny roa tonta fa tokony homena antoka dieny izao ireo mpifidy sy ny mpisehatra rehetra momba ny fifidianana ary ny antoko politika, mialoha ny fifidianana. Hafatra Pantekoty. Andrasana amin’izao faran’ny […]
Maty voatifitry ny dahalo, omaly maraina tamin’ny 6 ora sy 30 mn, ny zandary G2C Rabeherimpo Noelson tao Ankaboka, Fokontany Ranontsara, kaominina ambanivohitr’Andranolava Sakaraha. Araka ny fampitam-baovao voaray avy any an-toerana, nalain’ny dahalo anjatony nirongo basim-borona ny omby anjatony an’ny ben’ny Tanànan’Andranolava. Lasa nitsoaka avy hatrany ireo dahalo taorian’ny fanafihana. Nisy ny fanarahan-dia nataon’ny zandary […]
Par Taratra sur 13/05/2016 En Bref, NS Malagasy
Mitentina 100 tapitrisa Ar ny tetibidin’ny entana levon’ny afo vokatry ny haintrano tao Ambohinaorina Ankazobe, ny talata teo. Trano miisa 53 indray kilan’ny afo. Ankizy nahandro sakafo tao an-dakozia no nitarika ny fahamaizana satria nilaozan’ireo ankizy ny afo kitay. Nahazo ny tafo-bozaka ary niitatra tamin’ireo trano mifanila aminy ny afo. Miisa 230 ireo tsy manan-kialofana. […]
Par Les Nouvelles sur 12/05/2016 En Bref, NS Français
Marchés publics – Conférence autour du thème de règlement des différends et litiges La Chambre de commerce et d’industrie d’Antananarivo (CCIA) et l’Autorité de régulation des marchés publics (ARMP) organiseront une conférence sur le règlement des différends et litiges en matière de marchés publics, le 26 mai prochain au siège de la CCIA à Antaninarenina. Cette […]
Trafic de tortue à Mahajanga : Une personnalité connue dans le district de Soalala a été pris en flagrant délit de transport de tortue «angonoka» provenant des aires protégées de Madagascar national park (MNP), dans la nuit du dimanche, au port d’Aranta dans la ville de Mahajanga. Cette tortue femelle immatriculée MG 0014 par les agents […]
Baccalauréat – Aucun envoi de convocations par voie postale Pour éviter les erreurs d’adresse, l’Office du baccalauréat d’Antananarivo informe le public que l’envoi de convocations des candidats aux épreuves du baccalauréat par voie postale est annulé. Cette entité fait appel aux responsables de lycées et d’établissements scolaires privés de récupérer les convocations de leurs candidats, […]
Par Les Nouvelles sur 11/05/2016 En Bref, NS Français
Lutte antiacridienne – Le Sud et l’Ouest, toujours menacés Les faibles précipitations enregistrées dans les régions Ihorombe, Menabe et Atsimo-Andrefana qui ont entrainé un début de dessèchement de la végétation ont rendu favorable le développement des criquets migrateurs, annonce la Cellule de veille acridienne, selon un communiqué publié avant-hier par l’Organisation des Nations unies pour […]
Assemblée nationale – Reprise de la session parlementaire Le secrétaire général de l’Onu, Ban Ki-Moon étant en visite au pays pour deux jours, les sessions parlementaires au niveau de l’Assemblée nationale et du Sénat sont suspendues. Les députés reprendront demain leurs réunions à Tsimbazaza tandis qu’au niveau du Sénat, aucune date n’a encore été communiquée […]
Par Taratra sur 11/05/2016 En Bref, NS Malagasy
Lasa faritra mena amin’ny tsy fandriampahalemana eny amin’ny fokontany Faravohitra. Mikaikaika isan’andro ny mponina indrindra ireo mpianatra sy mpandeha fiara amin’ny afitsoky ny jiolahy mpanao sinto-mahery. Efa feno azy ireo ny elakelan-trano rehefa amin’ny antoandro sy amin’ny alina. Tsy misy ny fandraisana andraikitra ataon’ny tompon’andraikitra fa zary jerem-potsiny izy ireo. Ny mponina rahateo tsy afa-manoatra […]
Horaisin’ny etsy amin’ny Antenimierandoholona izao maraina izao ny Praiminisitra Mahafaly Solonandrasana. Hamelabelatra ny fandaharanasa ankapoben’ny governemanta (PGE) ny tenany. Hitohy ny tolakandro eny amin’ny Antenimierampirenena izany ny tolakandro. Noraisin’ny Praiminisitra Mahafaly, teny Mahazoarivo ireo depiote sasany eny Tsimbazaza. Tsy nisy nipika ny resaka. Na izany aza, voalaza fa fanomanana ny fihaonan’ny governemanta amin’ireo depiote ny […]
May ny tranon’ny Radio Andreas sy fitaovan-tserasera tany Antsohihy, ny 7 mey lasa teo tamin’ny 5 ora hariva. Noho ny “court circuit”, may ny trano sy fitaovan’ny radio voalaza etsy ambony, toy ny fitaovana mampandeha ny fifandraisana rehetra sy ny “groupe électrogène 4 temps”. May tao koa ny entana maro an’ny mpiambina toy ny fandriana […]
Par Taratra sur 07/05/2016 En Bref, NS Malagasy
Hanangana vovonan’ny hery ankavia ireo antoko sy fikambanana politika vitsivitsy. Nampahafantatra izany teny Faravohitra izy ireo, omaly. Nambaran’izy ireo fa mirona kokoa any amin’ny sosialy sy ny tsy fanekena ny tsy rariny izany hery ankavia izany. Anisan’ny mpikambana amin’izany ny olon-tsotra, ny sendikà, ny antoko politika. Nametraka ny taratasy teny amin’ny Antenimierampirenena, mirakitra ny fitoriana ny […]
Nomelohin’ny fitsara maorisianina ny vehivavy malagasy iray, antsoina hoe Marthe Agnès, 29 taona, avy any Mahajanga, nandritra ny fitsarana azy, noho ny fitondrana héroïne tany Maorisy. Zava-mahadomelina 650 grama no tratra tany aminy, izay avy aty Madagasikara nentina tany Maorisy, kanjo tratra ny 18 jona 2012. Izao vao niakatra fitsarana ny raharaha, ary izao nomelohina […]
Par Taratra sur 06/05/2016 En Bref, NS Malagasy
Napetraka tamin’ny fomba ôfisialy ny alarobia teo, teny amin’ny oniversiten’Antananarivo ny filoha Ramanoelina Panja, voafidy fanindroany indray hitantana ity ivontoerana ity. Tanjony ny hanohy ny asa rehetra fanatsarana, ka nampiakatra ny laharan’ny oniversiten’Antananarivo ho faha-73 (taona 2015) amin’ny oniversite aty Afrika. 98 ny laharantsika ny taona 2013. Hanomboka amin’ny alatsinainy izao ny Herinandron’ny fahasalaman’ny reny […]
Vonona ny hanampy ny Bianco hiady amin’ny kolikoly i Alemaina. Nandray ny ambasadaoron’i Alemaina, Harald Gehrig teny Ambohibao, ny talata teo ny tale jeneralin’ny Bianco, Andriamifidy Jean-Louis. Voaresaka ny fiaraha-miasa efa misy eo amin’ny roa tonta, amin’ny alalan’ny tetikasa, GIZ, hiadiana amin’ity aretina mihanaka eto amintsika ity sy ny olana manodidina izany. Maniry ny hampiroboroboana […]
Fatin-dehilahy iray manodidina ny 60 taona eo hitan’ny olona tanaty tatatra eny Ambohikely Itaosy ny alarobia alina teo. Mpandalo no nahita ny razanaa ka nampilaza avy hatrany ny manodidina. Tsy nisy nahafantatra ilay lehilahy ny mponina ka ny fokontany no nanatitra ny razana tao amin’ny HJRA. Efa somary simba ny razana satria efa ela ihany […]
« Précédent 1 … 125 126 127 128 129 … 143 Suivant »